डा. राजकुमार राई
मानिस चेतनशील प्राणी भएकाले उसले हरसमय चिन्तन गर्दछ । त्यही चिन्तनको गम्भीर रूपलाई चिन्ता भनिन्छ । चिन्तालाई अर्को शब्दमा पीर मान्नु वा तनावमा हुनु भन्न सकिन्छ । हरेक मानिस केही न केही चिन्ताले बाँधिइरहेको हुन्छ । चिन्ताबेगरको मानिस पाउन गाह्रो हुन्छ । आफ्नो उमेर, पेशा र जिम्मेवारीअनुसार सबैले चिन्ता महसुस गरिरहेका हुन्छन् । खालि चिन्ताको प्रकृतिमात्र फरक हुन्छ । चिन्ताको मात्रा व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । कोही बढी चिन्ता गर्छन् भने कोही ज्यादै कम चिन्ता गर्छन् ।
साना केटाकेटीलाई खानु र खेल्नुको चिन्ता हुन्छ । अलिक ठूलो भएपछि जब स्कुलमा भर्ना गरिन्छ तब उनीहरूलाई पढाइ, गृहकार्य आदिको चिन्ता हुन्छ । साथीभाइजस्तै रमाइलो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता हुन्छ । विद्यार्थीलाई कसरी परीक्षामा सफल हुने, कसरी राम्रो ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण हुने, कसरी छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । हाईस्कुल वा कलेजमा पुगेपछि पढाइसँगै भविष्यको वृत्ति विकासको चिन्ता हुन्छ । जागिरे मानिसलाई जागिरसम्बन्धी चिन्ता हुन्छ । जागिरमा कसरी बढुवा हुने भन्ने चिन्ता हुन्छ ।
किशोर किशोरीबाट वयस्क हुँदै जाँदा बिहेवारीको चिन्ता हुन्छ । विवाह गरेर छोराछोरी भएपछि सबैभन्दा बढी छोराछोरीका बारेमा चिन्ता हुन्छ । बाबुआमाका लागि छोराछोरीहरू आफ्नो प्राणभन्दा प्यारा हुन्छन् । छोराछोरीको विवाह गर्नेबेला भएपछि अर्को चिन्ता थपिन्छ । बुढेसकाल लागेपछि फेरि अर्कै किसिमको चिन्ता हुन्छ । यसरी चिन्ताले मानिसलाई कहिलै छोड्दैन । खालि जीवनका विभिन्न चरणअनुसार चिन्ताका विषय फरक–फरक हुन्छन् ।
बुढेसकाल लागेपछि शरीर कमजोर हुन्छ । काम गर्ने क्षमता घटिसकेको हुन्छ । विभिन्न किसिमको रोगले समातेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अरूको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली समाजमा आफ्ना छोराछोरीले बुढेसकालका बाबुआमाको स्याहारसुसार गर्ने चलन छ । तर सबैका छोराछोरीले आफ्ना बाबुआमालाई स्याहारसुसार नगर्न सक्छन् । यदि त्यस्तो अवस्थामा उसको पेन्सन वा कुनै आम्दानीको स्रोत भएन भने उसलाई बाँच्न गाह्रो पर्छ । यस कुराले चिन्तित बनाउँछ । मानिसले बुढेसकालमा आफ्नो जीवनलाई कसरी सजिलोसँग व्यतीत गर्ने भन्नेबारेमा उमेर छँदै योजनाबद्ध ढंगले सोचेको हुनुपर्छ ।
मानिसको आचरणअनुसार चिन्ताको विषय फरकफरक हुन्छ । कुनै नराम्रा लतमा लागेकाहरूलाई त्यसैको चिन्ता, लेखपढ गर्नेलाई लेखपढसम्बन्धी चिन्ता, धनसम्पत्ति कमाउनेलाई धनसम्पत्तिको चिन्ता, समाजसेवीलाई समाजको चिन्ता, राजनीति गर्नेलाई राजनीतिको चिन्ता आदि विभिन्न किसिमका चिन्ता हुन्छन् । चिन्ता परिस्थितिअनुसार पनि फरक–फरक हुन्छन् । छोराछोरी नहुनेको चिन्ता र छोराछोरी हुनेको चिन्ता फरक हुन्छ । छोरा हुनेलाई भन्दा छोरी हुनेको चिन्ता अलिक फरक ढंको हुन्छ । त्यस्तै महिला र पुरुषबीचको चिन्ता फरक हुनसक्छ ।
कुनै चिन्ता छोटो समय हुन्छ । उदाहरणका लागि कहिलेकहीँ भान्सामा पकाउने तरकारी नहुन सक्छ । घरकी गृहणीलाई के तरकारी पकाउने भन्नेबारेमा चिन्ता हुन्छ तर त्यो चिन्ता छोटो समयमै सकिन्छ । कुनै चिन्ता लामो समयका लागि हुन्छ । उदाहरणका लागि छोराछोरीले बेलामा बुद्धि नपु¥याएर दुःख पाए भने बाबुआमाका लागि जिन्दगीभर चिन्ताको विषय हुन्छ । साधारण मानिसहरू आफ्नो र आफ्नो घर परिवारको मात्र चिन्ता गर्छन् भने असाधारण मानिसहरू ठूलाठूला विषयका बारेमा चिन्ता गर्दछन् । आफ्नो परिवारलगायत समाज र मानव कल्याणका बारेमा चिन्ता गर्दछन् । असाधारण व्यक्तित्वमा गौतम बुद्धलाई लिन सकिन्छ ।
चिन्ता प्रायःजसो समस्याले ल्याउँछ । समस्या विभिन्न कारणहरूले आउँछ । कुनै समस्या आफ्नै स्वभावका कारणले हुन्छ । कुनै समस्या आवश्यकता वा अभावले आउँछ । कुनै समस्या घरव्यवहार बिग्रेर आउँछ । कुनै समस्या अज्ञानता वा बाध्यताले आउँछ । कुनै समस्या भवितव्य परेर आउँछ । सुखमा त्यति चिन्ता हुँदैन । जब मानिसलाई दुःख पर्छ तब चिन्ता बढ्छ । चिन्ता हुने कारणलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ः आन्तरिक कारण र बाहृय कारण ।
हरेक व्यक्तिका आआफ्ना किसिमका स्वभाव हुन्छन् । कोही ज्यादै कमलो र भावुक स्वाभावका हुन्छन् । कोही बढी महत्वाकाङ्क्षी र बढी आशावादी हुन्छन् । कोही अरूको प्रगति र उन्नति देखेर डाहा आहारिस गर्ने खालका हुन्छन् । यस्ता स्वभाव भएका मानिसहरू आफ्नै कारणले भित्रभित्रै चिन्तित भइरहेका हुन्छन् ।
राजदरबारभित्र सुखसयल र मोजमस्तीमा बसेका कमलो र भावुक स्वभावका राजकुमार सिद्धार्थ गौतमले जब मानिस जन्मेपछि बिस्तारै बुढो हुन्छ र एकदिन उसको मृत्यु हुन्छ भन्ने थाहा पाए, त्यसपछि उनी ज्यादै चिन्तित बनी आफ्नो परिवारसहित सारा सुखसयललाई त्यागेर मानिसको दुःखलाई कसरी जित्न सकिन्छ भनेर ज्ञानप्राप्तिमा लागे । विश्वप्रसिद्ध धेरै व्यक्तिका जीवनमा यो सन्दर्भ मिल्न जान्छ ।
बाहृय कारणले हुने चिन्ता अरूको कारण वा अन्य बाहिरी कारणले हुन्छ । उदाहरणका लागि धेरैजसो मानिसहरू आर्थिक कारोबार बिग्रेर अथवा व्यापार व्यवसाय डुबेर चिन्तामा फस्दछन् । कतिपय मानिसहरू पैसाको लेनदेनले पनि बढी चिन्तित भएको पाइन्छ । आपूmले दिएको पैसा अरूले खाइदिएर वा ठगीमा परेर चिन्तामा पर्छन् ।
त्यस्तै कोही पारिवारिक कारण त्यसमाथि पनि छोराछोरीको कारणले बढी चिन्तित हुन्छन् । कतिपय परिवारमा बाबुआमा र छोराछोरीहरूको सोच एउटै हुँदैन । छोराछोरीहरू बाबुआमाले देखाएको बाटो नहिँडेर आफ्नै बाटामा हिँड्न चाहन्छन् । त्यसो हुँदा बाबुआमाहरू छोराछोरीको भविष्यका बारेमा चिन्ता लिन्छन् ।
चिन्ता भन्नाले सामान्यतया नकारात्मक भाव बुझिन्छ तापनि चिन्तालाई नकारात्मक र सकारात्मक दुवै रूपमा लिन सकिन्छ । नकारात्मक चिन्ताले मानिसलाई बेफाइदा गर्छ । नकारात्मक चिन्ताले मानिसलाई तनाव दिन्छ, पीरमा डुबाउँछ । उसको काम गर्ने जोस जाँगर हराएर जान्छ । निद्रा नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, कसैसित भेट्न, बोल्न मन नलाग्ने हुन्छ । आत्मा कमजोर हुन्छ, हिम्मत घट्छ । अरूसित खुलेर बोल्न हाँस्न मन लाग्दैन । अत्यधिक चिन्तामा डुब्यो भने त्यसले मानसिक रोग निम्त्याउन सक्छ ।
सकारात्मक चिन्ताले मानिसलाई प्रगति उन्नति गर्न मद्धत गर्छ । सकारात्मक चिन्ताले व्यक्तिलाई सोच्न बाध्य गराउँछ, रचनात्मक बनाउँछ र चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न उत्प्रेरणा प्रदान गर्छ । चिन्तालाई चिन्तनमा परिणत गरी कुनै पनि समस्याको सम्भावित समाधानका विकल्पहरूको पहिचान गरी उत्तम विकल्पलाई अघि सार्न सकिन्छ । त्यसकारण चिन्ता गर्नु नराम्रो होइन तर त्यही चिन्तालाई बारम्बार दोहो¥याउनु चाहिँ राम्रो होइन । यथार्थलाई बुझेर कति लिने कति नलिने आफैंले बुझ्नुपर्छ ।
कोही आफ्नो चिन्ताबाहिर देखाउँछन् । कोही आपूmभित्र लुकाएर राख्छन् । चिन्तालाई आफूभित्र मात्र गुम्स्याएर राख्नु राम्रो होइन । यो कुनै बखत विष्फोट हुन सक्छ । कतिपय मानिसहरू चिन्तासित डराएर भाग्न खोज्छन् । चिन्ताबाट भाग्न कोही मादक पदार्थको सहयोग लिन्छन्, कोही आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । त्यो राम्रो होइन । चिन्तासित डराएर भाग्ने होइन, सामना गर्नुपर्छ । चिन्तासँग जुध्नका लागि इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । आत्मविश्वास बलियो हुनुपर्छ । आत्मा कमजोर भयो भने चिन्तासँग जुध्न गाह्रो हुन्छ ।
चिन्ता समाधानका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा आपूmले आफैंलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न समस्याबाट हुनसक्ने चिन्ताका लागि त्यो समस्या आउनुभन्दा पहिला नै सचेत हुनु जरुरी छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी महत्वाकांक्षी नबनेको राम्रो हुन्छ किनकि कुनै पनि काम गर्दा आफ्नो क्षमता र अवसरलाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै आफ्ना छोराछोरीहरूसँग ठिक्कमात्र आशावादी हुँदा राम्रो हुन्छ ।
चिन्तालाई न्यूनीकरण गर्न आफूलाई परेको चिन्ताका बारेमा घरपरिवारका सदस्य, आफन्तजन, मिल्ने साथीभाइ तथा आपूmलाई माया गर्ने, सहयोग गर्नेहरूबीच छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्छ । चिन्तासित सामना गर्न विभिन्न उपायको पहिचान गरी सबैभन्दा राम्रो उपायको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
(लेखक डा. राजकुमार राई नेपाली कांग्रेस खोटाङका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ)
मुलुकको राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख: नेता राई
काभ्रेमा नेकपालाई झड्का: वडा सदस्य उम्मेदवार तामाङ लगायत ४० जना कांग्रेसमा प्रबेश
काभ्रेमा नेकपा परित्याग गरी काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नेको लहर, प्रदीप पौडेलद्वारा स्वागत
काभ्रेमा दर्जनौ युवाले छाडे पुर्वमन्त्री बास्कोटाको साथ, गरे काङ्ग्रेसमा प्रवेश
काभ्रेमा माओवादी जिल्ला सदस्य सहित ४१ जना कांग्रेसमा प्रबेश